၁၂ရာသီခွင်ဖွားများ၏ ထူးခြားချက် - Chelmo News Portal
၁၂ရာသီခွင်မှာ ဘယ်ရာသီခွင်မှာ မွေးဖွားသူပဲဖြစ်ဖြစ် ထူးခြားချက်လေးတွေရှိတတ်ပါတယ်။
ဘယ်လို ထူးခြားချက်လေးတွေလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။
၀၁. မိဿရာသီ (Aries) : မတ် ၂၁ ရက်မှ ဧပြီ ၂၀ ရက်အတွင်း
– > တန်းမစီချင်သူ
မိဿရာသီဖွားကတော့ တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန် လုပ်ချင်ပြီးချင်သူ။ ဘာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်မယူပဲ မြန်မြန်ပြီးရမှ ကျေနပ်သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
၀၂. ပြိဿရာသီ (Taurus) : ဧပြီ ၂၁ ရက်မှ မေ ၂၀ ရက်အတွင်း
– > အစားအသောက်ဂျီးများသူ
ပြိဿရာသီဖွားကတော့ အစားအသောက် ဂျီးများသူများဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးပေါပေါနဲ့စားလို့ကောင်းတဲ့ဆိုင်ဆိုရင် မထိုင်ချင်ပါ။ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ဆိုင်ဖြစ်ရင် ဘယ်လောက်ပဲ ဈေးကြီးနေပါစေ၊ မနှမြောပဲ စားချင်တဲ့စိတ်ရှိသူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
၀၃. မေထုန်ရာသီ (Gemini) : မေ ၂၁ ရက်မှ ဇွန် ၂၀ ရက်အတွင်း
-> နားငြီးသောသူကို မုန်း၏
မေထုန်ရာသီဖွားရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ နားငြီးသောသူကို မုန်း၏။ ကိစ္စတစ်ခုခုကို အတူတူသွားရအောင်ဆိုပြီးဖိတ်လို့ သူကငြင်းလိုက်ပြီဆိုရင် နောက်တစ်ကြိမ်လည်း ဖိတ်ဖို့ကို မကြိုးစားပါနဲ့လည်း ပြောနေတာနဲ့ အတူတူအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။
၀၄. ကရကဋ်ရာသီ (Cancer) : ဇွန် ၂၁ ရက်မှ ဇူလိုင် ၂၀ ရက်အတွင်း
ကရကဋ်ရာသီဖွားတွေကတော့ အမြဲတမ်း ကူညီချင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သူတပါးက အကူအညီမလိုသောအချိန်မှာလည်း သူကတော့ ရတယ် လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာချည်းပဲ။ မကူညီရရင်မနေနိုင်သူပါ။ နားလည်ပေးလိုက်ပါ။
၀၅. သိဟ်ရာသီ (Leo) : ဇူလိုင် ၂၁ ရက်မှ သြဂုတ် ၂၁ ရက်အတွင်း
သိဟ်ရာသီဖွားတွေကတော့ ကိုယ့်အတွက်ချည်းသာ ကြည့်သောသူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကိုယ်မှလွဲ၍ အခြားသူမရှိလို့ ခံယူထားသူကများပါသည်။ သူပြောစကားကို နားမထောင်ရင်လည်း မကြိုက်တတ်ပါ။ မှားနေတယ်လို့ပြောရင်လည်း မကြိုက်ချင်ပါ။
၀၆. ကန်ရာသီ (Virgo) : သြဂုတ် ၂၂ ရက်မှ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်အတွင်း
-> ညစ်ပတ်သောသူကို မုန်း၏
ကန်ရာသီဖွားများကတော့ အသန့်ကြိုက်သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဝတ်အစား၊ အနံ့အသက် မကောင်းသူရှိလျှင် အတူတူရှိနေတာကို သည်းခံနေပင်မဲ့ ရင်ထဲမှာတော့ ဒီနေရာကနေ ဘယ်လိုထွက်ပြေးသွားရမလဲဆိုတာကိုပဲ စဉ်းစားနေသူပါ။
၀၇. တူရာသီ (Libra) : စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်အတွင်း
တူရာသီဖွားများကတော့ အမြဲတမ်း မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့ အတူတူနေချင်သောသူပါ။ တစ်ယောက်တည်းနေရမှာကို စိတ်ဆင်းရဲပြီး တစ်ယောက်တည်းသွားလာရတာကိုလည်း သဘောမကျပါ။ တစ်ယောက်တည်းနေရရင် စိတ်ထဲမှာ အလွန်ခံစားရသောသူဖြစ်တာကြောင့် သူ့ကို နားလည်းပေးလိုက်ပါ။
၀၈. ဗြိစ္ဆာရာသီ (Scorpis): အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်မှ နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်အတွင်း
-> အများရှေ့မှာ စကားမပြောနိုင်သူ
ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားများကတော့ လူကြောက်တတ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ရှေ့မှာ စကားပြောရမည့်အလုပ်ဆိုရင် ရှောင်ပြီး တတ်နိုင်သလောက် သူများကို တာဝန်ပေးစေချင်ပါတယ်။မဖြစ်မနေလုပ်ရပြီဆိုရင်လည်း သည်းခံပြီး ပြောပင်မဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ ဆင်ခြေပေးပြီး ဒီနေရာကနေ ထွက်ပြေးသွားချင်သူပါ။
၀၉. ဓနုရာသီ (Sagittarius) : နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်အတွင်း
-> ခြေမကိုင် လက်မကိုင် ဖြစ်နေတတ်သောသူ
ဓနုရာသီဖွားများကတော့ တစ်ခုခုကိုလုပ်ပြီဆိုရင် သူများထက်ကို အားတတ်သရောလုပ်ပင်မဲ့ လုပ်နေဆဲအလုပ်ထက် စိတ်ဝင်စားစရာပေါ်လာပြီဆိုရင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုထားပြီး အခြားအလုပ်ကို ပြောင်းလုပ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်အေးအေးထားပြီး လုပ်စေချင်ပါတယ်။ စိတ်ထဲထင်တဲ့အတိုင်းလုပ်တတ်တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့် သတိထားပါ။
၁၀. မကာရရာသီ (Capricorn) : ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်မှ ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်အတွင်း
-> ပိုက်ဆံမရှိလျှင် မနေနိုင်သူ
မကာရရာသီဖွားများကတော့ ပိုက်ဆံမရှိလျှင် မနေနိုင်ပါ။ ဘဏ်ငွေစုစာရင်း ကိုကြည့်ပြီး ပီတိဖြစ်နေသူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မလိုအပ်လျှင် ပိုက်ဆံကို မသုံးပဲချွေတာရေးကို ဦးစားပေးသူပါ။
၁၁. ကုမ်ရာသီ (Aquarius) : ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက်အတွင်း
-> အပေါင်းအသင်းဖြင့်သွားလာခြင်းကို သဘောမကျသူ
ကုမ်ရာသီဖွားများကတော့ တစ်ယောက်တည်းနေရတာကို သဘောကျသူပါ။ အလုပ်သဘောအရ အတူတူသွားလာ လှုပ်ရှားရမှာပါ မလုပ်ချင်ပါ။သွားလာဖို့ခေါ်ရင်လည်း အဖြေကတော့ NO ပဲဖြစ်မှာပါ။ အားနာလို့ဆိုရင်တော့ နေမကောင်းလို့၊ ကိစ္စရှိလို့ဆိုပြီး ဆင်ခြေတွေပေးပါလိမ့်မယ်။
၁၂. မိန်ရာသီ (Pisces) : ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်မှ မတ်လ ၂၀ ရက်အတွင်း
-> တစ်ယောက်တည်းဆို ဘာမှ မလုပ်တတ်သူ
မိန်ရာသီဖွားများကတော့ တစ်ယောက်တည်းဆိုရင် စိတ်အားငယ်တတ်သူပါ။ ပြဿနာတစ်ခုခုတတ်ရင် ချက်ချင်းဆိုသလို အကူအညီတောင်းတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့််ဟာကို ဖြေရှင်းပါလို့ဆိုရင်လည်း မဖြေရှင်းရဲပါ။ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ အစောင့်အရှောက်ကို ခံယူချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိသူပါ။ သူငယ်ချင်း သို့ ချစ်သူကို အနားမှာ အမြဲရှိစေချင်သူပါ။
၁၂ ရာသီခွင် မွေးဖွားသူများအတွက် ပြင်သင့်သောအချက်လေးများကို စုစည်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးက မှန်မယ်လို့လည်း မဆိုလိုပါ။
Comeback အသစ်နဲ့ ပရိတ်သတ်တွေရှေ့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတော့မဲ့ Big Bang အဖွဲ့
Bvlgari ရဲ့ New Collection မိတ်ဆက်ပွဲကို Ambassador အနေနဲ့ တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ LISA